ဒီလကၡဏာ ၁၄ ရပ္ျပေနျပီဆိုရင္ သင့္ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးေနျပီ…! - Thadin
HomeHEALTHYဒီလကၡဏာ ၁၄ ရပ္ျပေနျပီဆိုရင္ သင့္ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးေနျပီ…!
ဒီလကၡဏာ ၁၄ ရပ္ျပေနျပီဆိုရင္ သင့္ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးေနျပီ…!
June 11, 2019 Kay Kay HEALTHY Comments Off on ဒီလကၡဏာ ၁၄ ရပ္ျပေနျပီဆိုရင္ သင့္ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးေနျပီ…!
(၁၂)ေရကို လံုေလာက္စြာေသာက္ေပးပါ။ ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ဟာ ေက်ာက္ကပ္ေရဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၂၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိွိျပီး၊ ေရဓာတ္လံုေလာက္ေနလွ်င္ ထိုေရာဂါမွ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေရဗူးကို မိမိႏွင့္လက္တကမ္းမွာ အျမဲထားျပီး၊ ေရဆာတုိင္းေသာက္ေပးပါ။
တစ္ေန ့ကို ေသာက္ေရ ၁၀-ဖန္ခြက္ထက္မနည္းေသာက္ပါ။(သို ့ေသာ္ ျခြင္းခ်က္ အေနျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္အားနည္းသူ၊ ေက်ာက္ကပ္ျပႆနာရွိသူ၊ ဆီးခ်ိဳေပ်ာက္ေဆး၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္ မေကာင္းသူမ်ားဟာ ေရကိုခ်င့္ခ်ိန္ျပီးေသာက္သင့္ပါတယ္ သို ့မဟုတ္ပါက ေက်ာက္ကပ္မွာ၀န္ထုပ္၀န္ ပိုးျဖစ္ေစပါတယ္)
ဆီးအခြေအနေပြောင်းလဲခြင်းအစ ကျောက်ကပ်ရောဂါက” လို့မှတ်ပါလေ။ ပုံမှန်နဲ့မတူတော့ဘဲ ဆီးပမာဏများလာခြင်း၊ နည်းသွားခြင်း၊ မကြာခဏဆီးသွားခြင်း၊ ယခင်ထက် ဆီးအရောင်ရင့်လာခြင်း၊ အားစိုက်ကာ ဆီးကိုညှစ်ထုတ်၍သွားရခြင်းတို့ဖြစ် ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ညပိုင်းမှာဆီးသွားကြိမ်ရေများခြင်းဟာ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း၏ စဦးပိုင်းအခြေအနေဖြစ်တာကြောင့် လစ်လျူမရှုသင့်ပါဘူး။
ထိုအခြေအနေမှာ အချိန်မှီကုသယူမခံယူဖြစ်ပါက ကျောက်ကပ်၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိပျက်စီးသွားနိုင် တယ်လို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ Pune Region မှ ကျောက်ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာ အကြီးတန်းအကြံပေးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ Avinash Ignatius က သတိပေးထားပါတယ်။
(၁၂)ရေကို လုံလောက်စွာသောက်ပေးပါ။ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ကျောက်ကပ်ရေဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ၂၀ ရာခိုင် နှုန်းရှှိပြီး၊ ရေဓာတ်လုံလောက်နေလျှင် ထိုရောဂါမှ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရေဗူးကို မိမိနှင့်လက်တကမ်းမှာ အမြဲထားပြီး၊ ရေဆာတိုင်းသောက်ပေးပါ။
တစ်နေ့ကို သောက်ရေ ၁၀-ဖန်ခွက်ထက်မနည်းသောက်ပါ။(သို့သော် ခြွင်းချက် အနေဖြင့် ကျောက်ကပ်အားနည်းသူ၊ ကျောက်ကပ်ပြဿနာရှိသူ၊ ဆီးချိုပျောက်ဆေး၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြောင့် ကျောက်ကပ် မကောင်းသူများဟာ ရေကိုချင့်ချိန်ပြီးသောက်သင့်ပါတယ် သို့မဟုတ်ပါက ကျောက်ကပ်မှာဝန်ထုပ်ဝန် ပိုးဖြစ်စေပါတယ်)
(ဈ) *သဘာ၀ သစ်သီးဖျော်ရည်မဟုတ်တဲ့ အချိုရည်အမျိုးမျိုးနှင့် ဆိုဒါတို့မှာ တာရှည် ခံအောင်၊ အနံ့ကောင်းအောင် နှင့် အရသာရှိအောင် ဓာတုပစ္စည်းများသုံး၍ ပြုပြင်ထားကြောင့် အာဟာရ(လုံးဝ) မဖြစ်စေတဲ့ အပြင် ကျောက်ကပ်ကိုပါထိခိုက်စေပါတယ်။ ထို့နည်းတူ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဂက်စ်ထဲ့ထားတဲ့ အဖျော်ယမကာများကလည်း ကျောက်ကပ် ထဲရှိ သွေးကြောများကို ပျက်စီးခြင်း၊ ကျောက်တည်ခြင်း စတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ပြင် ကဖိန်းဓာတ် များတဲ့ ကော်ဖီ နှင့် လ္ဘက်ရည်များကို အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ သွေးလည်ပတ်စီးဆင်းမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးတာ ကြောင့်၊ သွေးဖိအားများလာပြီး ကျောက်ကပ်ကို တွန်းအားဖြစ်စေပါတယ် အချုပ်အားဖြင့် ”ယောင်္ကျားမှာဆီး မိန်းမမှာ မီး”ဆိုတဲ့အတိုင်း ဆီးရောဂါကို ပေါ့ပေါ့ဆဆ မနေပဲ ကုသသင့်ပါသည်။
ကနဦးသတင္း ဆရာဝန္(၃)ဦး ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားျပီး ေသဆံုး…!
နားၾကပ္အျမဲတပ္ေလ႔ ရွိတဲ႔သူေတြ သတိထားသင့္တဲ့ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား…!
This Year : 277266
Total views : 2982876